Fiaraha-mitantana ny nosy Eparsa “Mila samy mahazo fotsiny.”
Tsy olana ny miara-mitantana amin’ny frantsay ireo nosy manodidina, hoy ny mpahay toekarena, Jean Jacques Ratsietison, ary aleo aza miara-miasa aminy toy izay firenen-kafa. Mila samy mahazo fotsiny na “gagnant gagnant”.
Maty antoka isika raha ny vokatra fotsiny no zaraina. “Ny frantsay ve, ohatra, dia hanaiky hizara ny hetra voaangona amin’ny vahoaka frantsay amin’ny Malagasy ?”, hoy izy. Tsy hanaiky izy ary toy izany koa ny nosy Eparsa. Raha te hifampizara misasaka ny tombontsoa azo avy amin’ireo nosy manodidina antsika ireo ny frantsay dia mila mandoa vidim-pidirana, izany hoe, raha 100 no harena ao dia mandoa 50 amintsika aloha ny frantsay. Avy eo vao misasaka ary ilay 50 ahafahantsika mihetsika manao zavatra hafa. Atao mitovy ny vola harotsaka rehefa hifandraharaha ny olona 2 na orinasa 2 na hafa fa tsy hoe mody mandrotsaka antoka ny iray dia vita. Raha 20% no entiny dia tokony ho 20%-n’ny vokatra azo koa izany no anjarany, hoy hatrany ity mpahay toekarena ity.